Met wuxuu dhigayaa 375.000 oo sawir gebi ahaanba bilaash ah | Abuurista khadka tooska ah
Matxafka ugu weyn dalka Mareykanka wuxuu dhigayaa 375.000 oo sawir oo bilaash ah
Matxafka Metropolitan ee Farshaxanka ee New York wuxuu ahaa mid caan ah sanadkii hore markii nashqadeynta cusub ee Wolff Olins la ogaaday in xanaaqay xanaaq badan naqshadeeyayaasha.
Hadda wuxuu shaaca ka qaaday hindise cusub oo xiise leh oo ay adkaan doonto in aan lagu soo jiidan haddii aad tahay farshaxan ama naqshadeeye. Waxay cusbooneysiisay siyaasadeeda marin-u-furan ee furan waana la sameeyay guud ahaan shaqooyinka farshaxanka ka aruurinta 'Met' ee hoos timaada shatiga 'Creative Commons Zero'.
Tan macnaheedu waa taas qof kasta oo dunida jooga Waad geli kartaa oo soo dejisan kartaa sawirrada mid kasta oo ka mid ah goobaha dadweynaha ee ka shaqeeya ururinta dijitaalka ah ee 'Met' oo aad ku samayso wax alla wixii aad rabto iyaga. Hadday samaynayso isku-dhaf aan caadi ahayn, u rogeyso isku-darka dijitaalka ah, ama xitaa ku iibinta funaanadaha, waa la sameyn karaa.
Oo waxaa jira xulashooyin badan oo shuqullo ah, maadaama lagu qiyaasay uruurinta qaybta dadweynaha inay awoodaan gaadho 375.000 shaqo laga bilaabo wadar ahaan 1,5 milyan oo shey guud ahaan 5.000 oo sano oo dhaqan ah oo adduunka ka socda.
Ayaa lagu daray in ka badan 8.000 sawir si qofku awalba u raadsado, shaqooyin cusubna loogu daro waqti kadib. Sanadkii hore kaliya 18.000 shaqooyinka cusub ee dadweynaha ayaa lagu daray ururinta.
Jidka raadso gabal farshaxan ah runtii way fududahay. Waa inaad ka raadisaa ururinta khadka tooska ah ee loo yaqaan 'Met' iyo shaandhaynta bogga dadweynaha. Waxaad awoodi doontaa inaad ku sifayn karto raadinta fanaaniinta, nooca shayga, goobta, taariikhda iyo waaxda.
Met ayaa sidoo kale u diyaarineysa dhammaan 440.000 shaqooyinka farshaxanka ah Matxafka ayaa digitized ka dhigay Maanta; waxaa lagala soo bixi karaa GitHub.
Maaha kii ugu horreeyay hay'ad caan ah taasi waxay ka dhigaysaa aruurinta qof walba, sida Riksmuseum oo aan halkaan ka wadaagno.
Halkan waa inaad haysataa La Kulmay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Matxafka ugu weyn dalka Mareykanka wuxuu dhigayaa 375.000 oo sawir oo bilaash ah
Adobe wuxuu kor u qaadaa qiimaha Creative Cloud ee Boqortooyada Midowday sababtoo ah Brexit